Siyaasiyiinta Soomaliland Maxay ka Baran Karaan Mahathir Maxamed. W\_Q: Ibrahim iid Maxamed Dad-dhis | Haqabtire News
Siyaasiyiinta Soomaliland Maxay ka Baran Karaan Mahathir Maxamed. W\_Q: Ibrahim iid Maxamed Dad-dhis
December 26, 2016 - Written by admin
Burco(HTN)-Waa mid ka mid ah dadka ugu cad cad madaxda dalalka islaamka ee casrigaan, waana mid ka mid ah dadka ugu magaca dheer ummadda muslimiinta dhexdooda ,waa hormariyaha dhanka dhaqaale Wax barasho, Technology ee dalka Malaysia, da’diisu iminka waa 82 sano jir. Waa ra’iisul wasaaarihii Malaysiya intii u dhexeysey 1981 ilaa 2003..
Mahathir Mohamed raysal wasarahii dalka Malaysia , waana xidigii sida dayaxa uga muuqday taariikhda wadan kaasi .
Isagoo karti uyeeshay illahayna la qabtay in uu Malaysia oo ahayd wadan faqiir ah oo dib u dhacay u bedelo kana dhigo wadan leh horumar dhaqale oo ilaa hada lagu hago wadanka.
Mahathir Mohamed waxa u suragashay inuu hormariyo Malaysia una soo saaro dunida dhaqale ahaan horumartay .
Intii ka horaysa intaanu wadan qabsan, waxa dadka badankiisu ahaa dad ku nool dhulka tuuloyinka ah . dakhliga celcelis ahaan qofkii soo gala u qiyaastii ahaan jiray $ 1000.
1970kii xiliga mahatir uu qoray buugii ugu magac daray wanagii Malaysia , kasoo u qaybo badan ku dhalilay shacabka wadanka kuna sifeyay qaar cajis badan uguna baaqay inay u kacaan horumarka
Laakiin madaxda xisbigu waxay mahatir u arakayeen inan yar oo ka soo hor jeestay siyasada xisbiga loona bahan yahay in laga hor tago aragtiyada iyo fikiradaha u ku baaqayo.
Ugu dambayn mahatir waxa madaxdii xisbiga ku qanciyay in loo bahan yahay in dalka laga saaro xalada u ku sugan yahay taas oo ugu dambayn sababtay in xilaka qabto matahir Mohamed 1981
Mahatir Mohamed markuu qabtay xukunka waxa awooda saaray dhanka warshadaha guudaha dalka.
natiijada taas ka dhalatay ay keentay in dadka saboolka oo markii hore ahaa 52% ay noqdeen 2002 5%.
Halka u sidoo kale dakhligii qof ahaaneed ee ahaan jiray $1000 u sanadkii 2002 uu noqday wax ka badan $9000. Shaqo l’aantiina ay hoos ugu dhacaday 6%.
Ugu dambayn taasi waxay keentay in malaysia loo Aqoonsado wadan ugu dhaaqalaha badan wadamada koonfurta Asia oo ay ka tirsan tahay.
Mahatir Mohamed waxa u goamiyay khariirada lagu horu marinaya Malaysia , iyo siday u kala horeyaan arimuhu iyo natiijada ka soo biixi karta.
Waxana u goamiyay in horumarinta tacliinta iyo baadhista cilimiga lagu horaysiiyo qorshihiisa isagoo u qondeyay misaaniyad xadi saraysa .
Waxa kale u samayay oo u dhiiri galiayay wax beerista , taas oo keentay in la beero geedka saliida qumbaha oo ay Malaysia dibada u dhoofin jirtay sanadkii ugu horaysay waxa Malaysia laga dhoofiyay 1 milyan oo geedaha qumbaha ah .
Sidaasna ay Malaysia ku noqotay dalalka soo saara ee dhoofiya saliida qunbaha ugu badan .
Intaas ka dib waxa isbedel lagu sameyay xarumihii dalxiiska ee Malaysia taas oo xarumuhii ciidanka jaban ee dagaalkii 2aad ee dunida loo bedelay goobo dalxiis.
Talabada lagu sameyay dhinaca dalxiiska waxay keentay in dhaaqalihii Malaysia ka soo gali jiray xaga dalxiiska u kor kaco mudada 20 sanno ah waxan markii hore ka soo gali jiray dhaaqale dhan $900 milyan matahir markii u xilka qabtay u noqday $32 bilyan.
Mahair Mohamed waxa u dalkiisa ka sameyay jamcad lagu barto culumta islaamaka taas oo ka mid noqotay 100 jamacadood ee dunida ugu horeeya.
Waxana u dhisay mahatir Mohamed casimad ay dagaan dawladu taaso laga dhinac dhisay caasimada ganacsiga .
Mudaadii xilka hayay mahatir Mohamed waxa u suragashay 1981-2003 in uu wadankiisa ka soo qaado meel hoose oo u gaadhsiiyo heer aad u sareya , oo Malaysia lag daro wadamada hormaray.
Isagoo oo aan sii jeclaysan in uu kursiga sii fadhiyo ama ay dhaxlaan inamadiisu .
Dhinaca siyaasada arimaha dibada mahatir waxa ku lahaa samayn weyn , gaar ahaan shirkii arimaha islaamka ee ka hadalay , isagoo sheegay in yuhuudu dunida ka maamusho daha dabadiisa cidii aan iyaga ahayn ay geeri la doonayaan iyagoo cid kale u wakiilanaya fulinta hawshasi.
Xiliga oo wadamada reer galbeedku ay mahatir Mohamed ka dalbadeen in u arinka ka biyo raligalin inkasta oo aanu dhagaha u raaricin.